✍️: रासस	 🕒 प्रकाशित: २०७८ जेष्ठ ११, मंगलवार १६:०७
कोरोना सङ्क्रमणको दोस्रो लहरले अस्तव्यस्त बन्न पुगेको बाँके सामान्य अवस्थामा फर्किन थालेको छ । दिनहुँ कैयौँ सङ्क्रमित विरामीको मृत्यु हुने बाँकेमा पछिल्लो दुई दिनयता मृत्युदर शुन्यमा झरेको छ ।
“दैनिक सात/आठ सय लक्षणसहितका सङ्क्रमित फेला पर्ने गरेको बाँकेमा यो एक महिनाको अवधिमा सङ्क्रमित दर ह्वात्तै घटेको छ । लकडाउन र सचेतनाका कारण सङ्क्रमण घट्दै गएको हुनुपर्छ”, डा थापाले भने, “पछिल्लो केही दिनयता बाँकेमा कोरोना सङ्क्रमण र मृत्यु दर घटेको छ, यो हामी सबैको लागि खुशीको कुरा हो । तर पनि सजक भई अरुलाई पनि सजकता अपनाउन छोड्नु हुँदैन ।”
अस्पतालमा घट्यो बिरामीको चाप
“अहिले बाँकेका भन्दा पहाडी जिल्लाबाट आउने विरामीको सङ्ख्या बढी छ, पहिलेको तुलनामा अहिले अवस्था सामान्य हुँदै गएकोे छ”, डा. थापाले भने, “अहिले भेरी अस्पतालमा बेडको अभावका कारण भुईंमा सुतेर उपचार गराउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ ।”
“बाँकेको यो तथ्याङ्कले दोस्रो लहरको कोरोना खतरनाक रहेको देखिन्छ । कोरोनाको हिसावले बाँके पहिलो वर्ष पनि ‘हटस्पट’ बनेको थियो । वैशाख महिनामा पनि हालत त्यस्तै भयो । सङ्क्रमित र मृत्यु सङ्ख्यालाई हेर्दा एक वर्षलाई एक महिनाले धेरै पछाडी पारेको छ”, जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र बाँकेका स्रोत व्यक्ति वलीले भने, “गत वैशाखमा दश हजार एक सय १४ जना सङ्क्रमित भए । ६ हजार चार सय ७० जना निको भएर घर फर्किएका छन् । मृतकको सङ्ख्या एक सय ६७ छ । बाँकेमा शुरुदेखि वैशाख मसान्तसम्ममा १५ हजार ७२ जना सङ्क्रमित भएका थिए ।”
पहिलो लहरको कोरोना महामारीमा समयमै सङक्रमितको सम्पर्कमा आएकाको सोधीखोजी गर्ने, धेरै सङ्क्रमित देखिएका टोललाई सील गर्ने काम भएको थियो भने सरकारले चाँडै नै लकडाउन गरेको थियो तर सावधानी अपनाउन दोस्रो चरणमा केही ढिलाई भएको पाइएको भेरी अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष प्रमोद धितालको भनाइ छ ।
“जिल्ला कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र, बाँकेको वैशाख ३ गतेको बैठकमै हामीले तत्काल लकडाउन गर्न पटक–पटक आग्रह गरेका थियौँ तर त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएन”, धितालले भने, “ढिला गरेर वैशाख ९ गते नेपालगञ्जमा मात्र निषेधाज्ञा लगाउने काम भयो । यतिबेलासम्म ढिला भइसकेको थियो ।”
बाँकेका स्थानीय तहले गाउँ टोलमै धमाधम अक्सिजनसहितको आइसोलेशन केन्द्र बनाएपछि सङ्क्रमितलाई उपचारमा सहज भएको छ । कोरोना सङ्क्रमित बिरामीलाई तुरुन्तै सहजरुपमा स्वास्थ्यलाभको लागि स्थानीय तहले गाउँटोलमै आइसोलेशन केन्द्र बनाएका कारण उपचारमा सहज हुँदै गएको जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र बाँकेका स्रोत व्यक्ति तेज वलीले बताए ।
बाँकेमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले ५० शय्याको आइसोलेशन वार्ड निर्माण गरेको छ । भेरी अस्पतालले बिरामीको चाप थेग्न नसकेपछि उपमहानगरपालिकाले रामलीला मैदानस्थित नारी उत्थान केन्द्रको सभाहललाई अक्सिजनसहितको आइसोलेशन वार्ड बनाइएको नगरप्रमुख डा. धवलशमशेर राणाले बताए ।
जानकी गाउँपालिकाले वडा नं. ६ गनापुरस्थित खुला कारागारलाई ५० शय्याको आइसोलेशन बनाएको छ । नरैनापुर गाउँपालिकाले लक्ष्मणपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा २५ शय्याको आइसोलेशन सञ्चालनमा ल्याएको छ । कोहलपुर नगरपालिकाले प्राकृतिक चिकित्सालय तथा योग केन्द्रलाई कोभिड आइसोलेशन बनाएको छ भने राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले तीनवटा वडामा आइसोलेशन सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
बाँकेमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र कोहलपुर नगरपालिकाले होम आइसोलेशनमा बसेका सङ्क्रमितलाई घरमै स्वास्थ्य सेवा पु¥याएका छन् । नेपालगञ्जमा चिकित्सकीय परामर्शसहित स्वास्थ्यकर्मीको टोलीले घरमै स्वास्थ्य लाभ गरिरहेका सङ्क्रमित बिरामीहरुको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न थालेका छन् । भेरी अस्पतालका फिजिसियन डा।पारश श्रेष्ठ, मेडिकल कलेजमा कार्यरत नर्सिङ अधिकृत सुमन गिरीलगायतको स्वास्थ्यकर्मीको टोलीले सङ्क्रमित बिरामीहरुको घरघरमै पुगेर उनीहरुको अवस्था बुझ्ने गरेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता रिजालले बताए ।
बाँकेमा अहिले तीन सय ९४ जना अस्पताल र एक हजार पाँच सय ५७ जना होम आइसोलेशनमा रहेका छन् । बाहिरी जिल्लाबाट उपचारका लागि बाँके आएका दुई सय ४० जनाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र बाँकेका स्रोत व्यक्ति तेज वलीले जानकारी दिए ।